Ukujonga indawo yePolygon
Ayisiyiyo kuphela iipoligoni ezinokwahlulwa ngenani lamacala anawo kunye nee-engile zawo, kodwa zinokuphinda zibekwe ngokwamaqela ezinye zeempawu zazo. Iipoligoni unokuba neempawu ezintathu zobuntu: ukulingana, ukulingana, kunye nokuqhelekileyo.
Kwi equilateral ipoligoni, onke amacala ayalingana kwaye kukho i-engile enye engafaniyo. Kwi equiangular ipoligoni, zonke ii-angles ziyalingana kwaye ubuncinci icala elinye alihambelani nobude bamanye. A rhoqo ipholigoni zombini ziyalingana kwaye zilingana; ine-symmetry iyonke - amacala alinganayo kunye nee-engile ezilinganayo.
Eminye imigca ikhethekile
Xa usetha ukufumana indawo ye-polygon eqhelekileyo, kufuneka ugcine engqondweni ukuba iipoligoni eziqhelekileyo zinemigca enentsingiselo ekhethekileyo. Le migca ibandakanya irediyasi kunye neapothem.
Inkqubo ye- irediyasi ngumgca ohamba usuka embindini wepoligoni uye engqinibeni (okanye ivertex ukuba ukhetha i-babble yezobuchwephesha) yepholigoni-ukwahlula i-engile ngokulinganayo kubini. Xa ii-radii ezimbini ezahlukeneyo kwipoligoni zitsalwa zimbini ngokulandelelana, i-engile esembindini yenziwa embindini wepoligoni (jonga umfanekiso 1).
I-zofran dosing yabantu abadala
Umzobo 1: Iiradiyo ezimbini ezitsalwe kwimigca emibini elandelelanayo zenza i-engile esembindini yepoligoni rhoqo.
Ngokungafaniyo neradiyo, enqamlezayo i-engile, an Intshutshiso ibaleka isuka embindini wepoligoni iye ngqo kwicala elisicaba lepholigoni. Kwimpembelelo, i-apothem iba yinto ebonakalayo ye-bisector yecala elingqubana nayo (jonga Umzobo 2).
Umzobo 2: I-apothem ye-polygon eqhelekileyo iba yi-bisector ebonakalayo.
Ukubulawa kweethiyori kubakho ii-radii, ii-angles eziphakathi, kunye neeapothems zeepoligoni ezininzi. Nasi isishwankathelo sokonwaba kokufunda kwakho:
Ithiyori 5-8: Imitha yepholigoni rhoqo icwangcisa i-engile yangaphakathi.
Ithiyori 5-9: I-engile esembindini yepoligoni rhoqo iyahambelana.
Ithiyori 5-10: I-engile esembindini yeepoligoni ezininzi ezinamacala alinganayo ziyahambelana.
Ithiyori 5-11: Umlinganiso we-engile esembindini kwipoligoni eqhelekileyo ilingana no-360 ° yahlulwe ngenani lamacala e-polygon.
Ithiyori 5-12: I-apothem ye-polygon eqhelekileyo ibeka i-engile esembindini (emiselwe kwicala) etsalwe kuyo.
Ithiyori 5-13: I-apothem ye-polygon eqhelekileyo yi-bisector ejikelezayo kwicala elitsaliwe.
Ungawubala ummandla wepoligoni rhoqo ngokusebenzisa ubude beapothem yayo kunye nobude bomjikelezo wayo: Kuya kufuneka ujonge iperimeter kwaye ubone ubude bayo. Sebenzisa ulwazi malunga nobude becala elinye. Ngenxa yokuba ipholigoni ihlala ihleli, ubude buyafana kwicala ngalinye. Phindaphinda inani lamacala e-polygon ngobude becala elinye, kwaye ufumana iperimeter. Ummandla wepoligoni rhoqo ulingana nesiqingatha semveliso yeapothem kunye nomjikelezo.
Ithiyori 5-14: Ifomula yommandla wepoligoni eqhelekileyo yile UKUYA = 1/2 ap , phi ukuya sisikhuthazo kunye iphe Umjikelezo.
ibhetri yolawulo lokuzalwa kwehlobo
Translation: Ukuba unepoligoni rhoqo, fakela ubude beapothem kunye nomjikelezo kwifomula, kwaye ufumana loo ndawo.
Jonga uMzobo 3 umzekelo. Ulwazi olunikiweyo lubonisa ukuba ubude becala elinye lepentagon lilingana no-5 kwaye i-apothem ilingana no-6. Phambi kokuba umisele indawo, kufuneka uqale ubale umjikelezo. Ukuba ubude becala elinye le-pentagon buli-5, ngoko umjikelezo ulingana nobude obusecaleni besi-5 siphindaphindwe ngamacala amahlanu. Ke umjikelezo opheleleyo wepentagon ulingana nama-25. Ukuba ufakela olu lwazi kwifomula yendawo, ufumana oku kulandelayo:
UKUYA = 1/2 (6) (25)
Ungayithatha njani i-prednisone
UKUYA = 75
Ke indawo yepentagon kuMzobo 3, ngolwazi olunikiweyo, ziiyunithi zesikwere ezingama-75.
Umzobo 3: Ungawuchaza ummandla wepentagon ngokuqala ngobude becala elinye kunye nobude beapothem.
Ngoku khawuqwalasele oku: Kanye njengoko unokongeza amacandelo emigca kunye neeengile, unokongeza iindawo.
Bhala u-5-1: Ukuba ipoligoni ivingca imimandla emincinci, engenakugqithana ngaphakathi komjikelezo wayo, ke loo ndawo yelo poligoni ilingana nesixa semimandla yemimandla evaliweyo.
Jonga i-concave polygon kuMzobo 4. Ukufumana indawo yonke yomzobo, fumana indawo yamacandelo onokuyifumana ngokulula. Jonga ngokusondeleyo: Ngokwenyani ungaqhekeza ipoligoni ibe ziingxande ezibini ezingagqumeki. Fumana indawo yoxande nganye uze ubadibanise kunye. Unendawo yendawo yepoligoni yonke.
Umzobo 4: Kwipoligoni, isixa semimandla yemimandla engagqithiswanga ilingana nayo yonke le ndawo ipholigoni.
indlela yokunyanga isilonda esiswini ngokusisigxina
Zithini izibonelelo zeoyile ye-cbd
Isisombululo se-saline se-nebulizer
I-laxatives ekhuselekileyo ngelixa uncancisa
ningathatha i-claritin kunye ne-sudafed kunye